Shwe Chi | Colourful Recipes
← Grilled Beef Salad
Beef and potato curry →
Butter – 3/4 cups (6Oz )
Coconut Cream –2Cans
375°F – 35 minutes
After Shwe Chi has cooled for 30 minutes.
ရွှေချီ – ၂ ခွက်
သကြား – ၃ ခွက်
ထောပတ် – ၆ အောင်စ (3/4 cups)
အုန်းနို့ရည် – ၂ ဗူး
အဆက်မပြတ်မွှေပေးထားလိုက်တယ်။ မုန့်ကျက်ပီဆိုရင် ….
အပေါ်ကနေ … အုန်းနို့ရည်ဖျန်း
oven မှာ အပေါ်မီး Broil – ၁၅ မိနစ်
အောက်မီး ၃၅၀ ºF – ၁၅ မိနစ်
ရွှေချီ ဆနွင်းမကင်း လေးထောင့်တုံး
ဒူးရင်းသီးဖတ်လေး ထည့်ပီး ဒူးရင်းသီး ရွှေချီဆနွင်းမကင်းလေး ချက်ချင်ပါသေးတယ်။
ရွှေပုစွန်ပိုစ့် မှာ သမီး Angel ကြိုက်တဲ့ ရွှေပုစွန်က snow ball ကွတ်ကီးကို စားချင်နေတာနဲ့ ဒီမှာ ၀ယ်လို့ရတဲ့ Meringue cookie ကိုပဲ ၀ယ်စားလိုက်ပါတော့တယ်။
** My old blog – thiriyatanar.blogspot.com
By Thet Nandar • Posted in Cooking Ingredients, Myanmar Traditional Foods, Price - Cooking Ingredients	• Tagged သီရိရတနာ, ရွှေချီ, ရွှေချီဆနွင်းမကင်း, ရွှေကြည်, ရွှေကြည် ဆနွင်းမကင်း, breakfast, cans, Coconut Cream, dessert, food, Myanmar Traditional Food, poppy seeds, shwe, sooji
2 comments on “Shwe Chi”
Pingback: Shwe Chi
အစ်မ ရေ ရွှေချီနဲ့ ဘိန်းစေ့က ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရမလဲ? ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ပြောပြပါလား။walmart မှာ ရနိုင�
အစ်မရေ ရွှေကြည် က စားချင်စရာလေး၊ ရွှေချီ နဲ့ ဘိန်းစေ.ကဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ?ကျေးဇူးပြုပြီးတေ့ ညီမလေးပြောပြပါလားwalmart မှာရောရ နိုင်လား.